USA Grade 12 Program [ACT-GAC] – Crown Education
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Ivy League တက္ကသိုလ်ကြီးများအပါအဝင်၊ ပြည်နယ်အသီးသီးရှိ Ranking မြင့်မားသော တက္ကသိုလ်ကြီးများသို့ဝင်ခွင့်ရရှိရန်နှင့်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်လွှားတက္ကသိုလ်များသို့ ပညာသင်ဆုများလျောက်ထားရာတွင် SAT သို့မဟုတ် ACT ရမှတ်ကိုတင်ပြရလေ့ရှိပါသည်။
(Covid-19 အခြေအနေကြောင့် အမေရိကန် တက္ကသိုလ်အများစုမှ SAT/ACT မပါပဲလျောက်ထားခွင့်ပြုသည်။ သို့သော်ပညာသင်ဆုနှင့် Ranking ကောင်းသောတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်မျှော်မှန်းသောကျောင်းသူကျောင်းသားများ၊ SAT/ACT ရမှတ်များပြင်ဆင်ပြီမှလျောက်ထားသင့်သည်။)
မြန်မာနိုင်ငံကျောင်းသားအများစုအနေဖြင့် SAT စာမေးပွဲကိုသာရင်းနှီးကြပြီး၊ Exam Center ရရှိရန်ခက်ခဲသော ACT (American College Test) ကိုလူသိနည်းကြသေးသည်။ ACT -American College Test အောက်တွင် ACT-GAC ဟုခေါ်တွင်သည့် USA Grade 12 လက်မှတ်ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ SAT ပြင်ဆင်ပါက သီးသန့် USA Grade 12 လက်မှတ် မပါဝင်ပဲ၊ ACT ပြင်ဆင်ပါက ACT-GAC အဖြစ် USA Grade 12 လက်မှတ်ပါတစ်ပါတည်းရရှိမည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ACT ဝက်ဆိုက် ဤနေရာတွင်နှိပ်၍ CLICK HERE ကြည့်ရှု့နိုင်သည်။
(၁၂)တန်း ပညာရေးစနစ်ဖြစ်သည့် American Grade 12 Program( ACT- Global Assessment Certificate) ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု IOWA ပြည်နယ်အခြေစိုက် ACT,INC. နှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ CROWN Education/Royal Academic Institute တို့နှင့် ပူးပေါင်းစီစဉ်ကာ၂၀၁၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှစပြီး ယခုလက်ရှိ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိ (၅)နှစ်ကျော် ကာလအတွင်း Batch (၂၃) အထိ ဖွင့်လှစ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီး ကျောင်းသားဦးရေ (၄၀၀) နီးပါး သင်ကြားမွေးထုတ်ကာ၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးတွင်၊ တက္ကသိုလ်တိုက်ရိုက်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပညာသင်ဆုများနှင့် လည်းကောင်း၊ ပညာလေ့လာသင်ယူဆည်းပူးနေကြပြီး၊ အချို့ လုပ်ငန်းခွင်တွင်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြသည့်အထိကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ACT-GAC တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးကမ္ဘာအရပ်ရပ်တွင်ပညာသင်ကြားနေကြသည့်ကျောင်းသူကျောင်းသားများ၏ အကြောင်းကို ဤနေရာတွင်နှိပ်၍ CLICK HERE ကြည့်ရှု့နိုင်သည်။
American Grade 12 Program (ACT – Global Assessment Certificate) ကို ပြည်တွင်းတွင် (၁)နှစ် ကြာတက်ရောက်ရမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ပရိုဂရမ်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ တက္ကသိုလ်များအပါအဝင် သြစတြေးလျ၊ ကနေဒါ၊ စင်ကာပူ၊ အင်္ဂလန် တက္ကသိုလ်များမှ Foundation အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားပါသည်၊၊ အဆိုပါ တက္ကသိုလ်များတွင် Foundationတက်ရောက်ရန် မလိုအပ်တော့ဘဲ တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်(တစ်ချို့ တက္ကသိုလ်များတွင် ဒုတိယနှစ်အထိတိုက်ရိုက်) တက်ရောက်ခွင့်ရရှိမည့် ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါသည်၊၊
Module Name and Type
compulsory and co-requisite
Class Ind. Study Total
GAC001 Academic English I: Listening and Speaking Skills 40 20 60
GAC002 Academic English I: Reading and Writing Skills 40 20 60
GAC006 Business, Science, Social Science, Communication Skills and Psychology 40 20 60
Total Hours Level I: 240 hours of classroom arudy, plus 120 hours of Independent Study. Modules 001-006 are compulsory.
GAC007 Academic English II: Listening and Speaking Skills 40 20 60
GAC008 Academic English II: Reading and Writing Skills 40 20 60
Students choose4of the6following specialization subject areas:
GAC010 Mathematics II: Probability, Statistics and Finance 40 20 60
GAC027 Social Science II: Identity and Interaction in Society 40 20 60
Electives: Students may choose to study one of the following modules. Note: These modules do not contribute to the final qualification.
Total Hours Level II: 240 hours of classroom arudy, plus 120 hours of Independent Study.
Class Ind. St Total
GAC014 Academic English III: Listening and Speaking Skills 40 20 60
GAC015 Academic English III: Reading and Writing Skills 40 20 60
Students choose4of the7following modules:
GAC016 Mathematics III: Calculus and Advanced Applications 40 20 60
Electives: This module prepares students for the ACT Test which is an international standardized university admission test.
Note: This module does not contribute to the final qualification.
Total Hours Level III: 240 hours of classroom arudy, plus 120 hours of Independent Study and an optional 40 hours of ACT Preparation Skills.
မြန်မာနိုင်ငံမှကျောင်းသူကျောင်းသားများဖြတ်သန်းခဲ့ရသော ပညာရေးများသည်၊ စာမေးပွဲစစ်ဆေးခြင်းဖြင့် ကလေးပညာရေးကိုအကဲဖြတ်စစ်ဆေးသည်။ စာကျက်ဖတ်နိုင်စွမ်းရှိသည့်ကလေးများရှိသကဲ့သို့၊ စာမေးပွဲစနစ်ဖြင့်အံမဝင်၍ မိမိတို့အရည်အသွေးများကို မပြသနိုင်ကြသည့်ကလေးများလည်းရှိသည်။
ACT-GAC စနစ်တွင် ကလေးများ၏အရည်အသွေးကိုရှု့ထောင့်ပေါင်းစုံမှချဉ်းကပ်၊အကဲဖြတ်သည်။ မြန်မာဆယ်တန်းအမှတ်မကောင်းသည့်ကလေးများလည်း မိမိတို့စိတ်ဝင်စားသည့်ဘာသာရပ်တွင်ထူးချွန်နိုင်သည်။ မြန်မာဆယ်တန်းအမှတ်ကောင်းပြီး ဘာသာရပ်ရွေးချယ်မှုမမှန်ကန်ပါကလည်း၊ သူတို့ထူးချွန်မှုနှင့် မလိုက်ဖက်သည့်ပညာရေးစနစ်ကိုရွေးချယ်မိပါက၊ အောင်မြင်သင့်သလောက်မအောင်မြင်ဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါအချက်လက်များကိုသိရှိနိုင်စေရန် ACT-GAC ပရိုဂရမ်တွင်ပါဝင်သော Psychology ဘာသာရပ်မျိုးကို စနစ်တကျလေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့်များစွာအကြိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်လေ့လာသင်ယူစဉ်အတွင်း၊ ဘာသာရပ်ဆုံးဖြတ်ရန်မလိုသေးပဲ၊ ဤပရိုဂရမ်ပြီးဆုံးမှ အင်ဂျင်နီယာ၊ စီးပွားရေး၊ကွန်ပျူတာ၊ အာခီ၊စသဖြင့် မိမိတို့ နှစ်သက်ရာနိုင်ငံအသီးသီး၏ တက္ကသိုလ်များတွင်လေ့လာသင်ယူနိင်ပါသည်။ မိဘများအနေဖြင့်လည်း ကုန်ကျစရိတ်များစွာ သက်သာနိုင်သည့်အပြင် မိမိတို့ကလေးများကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံတကာပညာရေးစံချိန်စံညွှန်း များအတိုင်း ကောင်းမွန်စွာပြင်ဆင်ပေးလိုက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်၊၊
ထို့အပြင် မြန်မာအစိုးရကျောင်းထွက်ကျောင်းသူကျောင်းသားများသည့် အင်္ဂလိပ်စာအားနည်းခြင်း၊ Presentation လုပ်သည့် အတွေ့အကြုံများမရှိခြင်း၊ စာကြိုးစား၊ တော်လေ့ရှိကြသော်လည်း မိကိုယ်ကိုယ်မိမိယုံကြည်အားနည်းခြင်း၊ မိဘများအပေါ်မှီခိုလွန်းခြင်းစသည့် အားနည်းချက်လေးများတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ နိုင်ငံတကာတွင်ပညာလေ့လာသင်ယူရန် အဆိုပါအားနည်းချက်များကို ဤပရိုဂရမ်မှ အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြင်ဆင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ACT-GAC ကိုတက်ရောက်ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ပညာသင်ကြားနေကြသောကျောင်းသားကျောင်းသားလေးများ၏ တက္ကသိုလ်များ/ဘာသာရပ်များ/ပညာသင်ဆုများကို ဤနေရာတွင် CLICK HERE ကြည့်ရှု့လေ့လာနိုင်သည်။
ဤပရိုဂရမ်ပြီးဆုံးပါက၊ စင်္ကာပူ၊ အင်္ဂလန်၊ သြစတြေးလျ၊ အမေရိကန်၊ ကနေဒါ၊ ထိုင်း၊ မလေးရှား၊ ဂျပန်နိုင်ငံတို့တွင် ဆက်လက်ပညာသင်လေ့လာနိုင်ပြီး၊ နိုင်ငံနှင့်တက္ကသိုလ်စာရင်းအသေးစိတ်ကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
For further information about Pathway Universities including their entry requirements and how to chooseasuitable Pathway University.
Asian Institute of Technology (School of Management)
STATE UNIVERSITY OF NEWYORK PLATTSBURGH